Marwada kowaad ee Nayjeeriya oo sheegtay in Madaxweyne Buhari uusan u xanuunsanayn sida la mooday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMarwada kowaad ee Nayjeeriya oo sheegtay in Madaxweyne Buhari uusan u xanuunsanayn sida la mooday
May 3, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweyne Maxamed Buhari iyo marwadiisa Caasha Buhaari. [Xigashada Sawirka: AFP]
Abuja-(Puntland Mirror) Marwada kowaad ee dalka Nayjeeriya Caasha Buhaari ayaa sheegtay in saygeeda uusan u xanuunsanayn sida dadka ay moodeen.
Waxay Twitter-ka ku soo daabacday in Madaxweyne Maxamed Buhaari oo 74-sanno jir ah, uu wato inuu guto waajibaadkiisa uuna la kulmo wasiiradda.
Koox magac ku leh gudaha Nayjeeriya ayaa u jeediyay Mudane Buhaari in uu qaato fasax caafimaad iyadoo ay kordhayso walaaca ku saabsan caafimaadkiisa.
Bartamihii bishii lasoo dhaafay ee Maarso, ayuu adlka ku noqday kadib todobo asbuuc oo uu fasax caafimaad u joogay gudaha dalka UK halkaas oo looga daaweeyay xanuun aan la sheegin.
Markii uu dalkiisa ku noqday waxa uu sheegay in uusan xanuunsan.
Waxa uu ka maqnaa labadii kulan ee golaha wasiiradda sidoo kale waxaan lagu arag salaadihii Jimcada ee u dambeeyay ee masaajiidka oo kuyaala aqalka madaxtooyada.
Wasiirka Warfaafinta Nayjeeriya Lai Mohammed ayaa asbuucii lasoo dhaafay warbaahinta u sheegay in caafimaadka madaxweynuhu uu yahay “arrimo shakhsiyadeed”.
February 12, 2017 Waqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaal rido dheer
November 11, 2016 Taalibaan oo weerartay safaarada Jarmalka ee Afkaanistaan
Maamul goboleedka Galmudug oo doortay Madaxweyne cusub
Wounded Somalians to be treated in Turkey
The injured from Saturday’s truck bombing in Somalia will be brought to Turkey for medical treatment, the Turkish presidential spokesman said Sunday. In a message on his Twitter account, Ibrahim Kalin said: “A military air [...]
Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump oo weeraray Soomaalida joogta Maraykanka
Washington-(Puntland Mirror) Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump ayaa weeraray bulshada Soomaalida ee kunool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ah bulshada ugu badan ee gobolkaas kunool. “Halkan Minnesota, waxaad ku aragteen dhibaatooyinka ay keeneen [...]